Farmaajo: "ma jirto cid Soomaaliya qasab ku xukumi karto". - BBC News Somali
Farmaajo: "ma jirto cid Soomaaliya qasab ku xukumi karto".
Image caption Madaxwayne Farmajo
"Waxaa naga go'an sidii loo gaari lahaa qarannimo Soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh umadda Soomaaliyeed na ay u siman tahay ".,ayuu yiri Mr Farmaajo.
"Waxaa sidaasi si la eg shacabka Soomalaiyeed ugu baaqayaa iney si dhaw ula shaqeeyaan dowladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafka guud oo ah qarannimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan ".,ayuu intaa ku daray.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in dowladiisa ay ka shaqeyso sidii loo so celin lahaa sharaftii iyo hay'badii ay Soomaaliya calamka ku dhex lahayd.
"Waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii an u so celin lahayn sharaftii iyo hey'baddii ay umadda Soomaaliyeed aduunka ku lahayd ".,ayuu yiri madaxwayne Farmaajo.
"Waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo is tixgalin ku dhisan aan la yeelano wadamad aduunka iyo kuwa gobolka ".,ayuu yiri.
"Waxaan idin xaqiijinaynaa inaan Marnaba ka daali doono inaan sharaftii iyo sumcadda Soomaaliyeed aan dib u soo celino ".,ayuu intaa ku daray.
Image caption Wasiirka maaliyadda Soomaaliya
"Kobcinta dhaqaalaha dalka waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhimsan ee dhismaha qarannimada sidaasi awgeed waxa maamulkeygu ahmiyad gaar ah siiyay sidii dib loogu soo yagleeli lahaa hab dhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarannimadeenii dib u hanano ".,ayuu yiri madaxwaynaha.
"Waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinay sidii deymanka noogula cafin lahaa iyo sidii aaan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha ".,ayuu yiri.
"Sharuudaha harsan ee nagala rabo inaan si degdeg ah ku dhameystirno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhameystiro",ayuu intaa ku daray.
"Waxaa naga go'an inaan umadda Soomaaliyeed aan dib u walaaleyno anagoo u mareyna dhaqankii wanaagsanaa ee is cafinta iyo isu tanaasulka ".,ayuu yiri madaxwaynaha.
"Qarannimo waxaan ku gaari karnaa oo kali ah inaan is cafino alle u noqono dalkeena dhismihiisa aan ka wada qeyb galno ".ayuu intaa ku daray.
"Haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hogaamin karaan,waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu oor-kacsan jiray ".,ayuu yiri Mr Farmaajo.
Image caption Madxweyne Deni oo soo dhaweynaya Madaxweyne Farmaajo
"Nidaamka fedaraalku wuxuu si cad u qeexayaa awood qeybsiga dowladda dhexe iyo dowlada xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madaxbanani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka ".,ayuu yiri madaxwayanha.
"Waxaan idin xusuusinayaa in masuuliyada ilaalinta qarannimada dalka iyo madaxbanaanidiisuba ay saaran tahay dowladda fedaraalka ah ".,ayuu intaa ku daray.
Image caption Farmaajo iyo Abiy oo xabadka isku salaamaya
"Xiriirka aan leenahay dalalka dariska ah waa mid aan doonayno in uu ku dhisnaado mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasi oo ku dhisan is-ixriraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyada oo dhan ah ".,ayu yiri.